Haus Gartner indlu 4-6 abantu Neukirchen - I-Airbnb
Haus Gartner indlu 4-6 abantu Neukirchen
Sulzau, Salzburg, Austria
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJolanda
Indawo yokuhlala, kuquka iKhadi lehlobo laseHohe Tauern, lihlala kwindawo yolondolozo lwendalo entle. Indawo yoku-1 ye-ski kukuhamba ngemizuzu emi-5 kwaye iindlela zikufuphi nendlu yethu. Le ndawo ifanelekile kubathandi bezemidlalo, abathandi bendalo kunye nabantu abafuna ukwenza uhambo ehlotyeni nasebusika. Ukusuka kwindlu yethu kukho iindlela ezininzi ezintle zokuhamba, kuquka i-Untersulzbach waterfall, ukuhamba ngemizuzu eyi-15. Ungonwabela kwigadi yethu enoxolo okanye kwibalcony yakho yabucala ngombono weentaba.
Indlu ye-4-6 yomntu ye-60 m2 kumgangatho wokuqala iqukethe ikhitshi kunye namagumbi amabini okulala. Ikhitshi / igumbi lokuhlala elinebalcony linefriji yefriji, isitya sokuhlamba izitya, i-oveni, umenzi wekofu kunye neketile. Amagumbi amabini okulala anebalcony (amathathu kunye naphindwe kabini) anebathroom yawo eneshawa, indlu yangasese kunye nesinki. Kukho ibhedi yesofa kwigumbi lokutyela ekhitshini. Indawo yokuhlala inomnyango wayo.
Kuyenzeka ukuba ubhukishe igumbi lokulala elongezelelweyo elinebhedi ephindwe kabini ngokwahlukileyo kule ndlu.
4.96 · Izimvo eziyi-26
Indlu evaliweyo enendawo yokupaka eyaneleyo ibekwe kumbindi wendawo yogcino lwendalo yeHohe Tauern enemibono entle macala onke. Indawo yaseWild Kogel Arena Ski yimizuzu emi-5 yokuqhuba eNeukirchen. Le ndawo yokutyibiliza ifaneleke kakhulu kwiintsapho kwaye ineyona ndawo ide yakhanyiswa yi-toboggan ehlabathini. Abo bafuna umngeni omninzi banokuya kwezinye iindawo zokutyibiliza ekhephini. IPanoramabahn Kitzbüheler Alpen kunye neZillertal Arena (Gerlos, Königleiten). Olu luhambo lwemizuzu eli-15 kunye nengama-20 ukusuka kwindlu yethu, lukwafikeleleka nangebhasi yokutyibilika. Ehlotyeni sinikezela ngeNationalpark Sommercard Hohe Tauern, eli khadi linika ukungena kwamahhala kunye nezaphulelo ezintle kwimisebenzi emininzi kwindawo. Kubathandi bokuhamba intaba, iintlambo ze-Unter kunye ne-Obersulzbachtal zikumgama wokuhamba wendlu yethu. Ukusuka kwindlu yethu unokuthatha ukhenketho lwendlwana ukuya eKurtzinge Hutte. I-toboggan run kwilali yethu i-Neukirchen isetyenziswa ehlotyeni ukubaleka ukuhla intaba ngeekarti zeentaba. Iingxangxasi zaseKrimmler, ezinkulu kuMbindi Yurophu, zikude ngeekhilomitha ezisi-7. Ukongeza, kwilali yaseNeukirchen kukho ikhosi yokutola, indlela yesilayidi, iivenkile, iivenkile zokutyela, ivenkile enkulu kunye nevenkile yokubhaka ngaphakathi kwemizuzu emi-4 ukusuka endlwini. Indawo yokutyela yaseSiggen kukuhamba imizuzu emi-5. Ngemoto usenako ukuqhuba usiya eKaprun okanye kwiGroßglockner. IKaprun imi kumphakamo weemitha ezingama-3,029 eKitzsteinhorn Glacier.
Umbuki zindwendwe ngu- Jolanda
Sinika iindwendwe indawo, kodwa siyafumaneka xa kufuneka.
Inombolo yomthetho: 50614-003078-2020
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sulzau